चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले दियो स्वीकृति — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले दियो स्वीकृति
चक्रपथ विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले दियो स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको चक्रपथ विस्तारका आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि कलंकी महाराजगञ्ज धोवीखोला खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।
कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको चक्रपथ विस्तारका लागि निजी घर पनि भत्काउनुपर्ने भएको छ । सडक विस्तारका लागि साइट क्लिरेन्स काममा सघाइरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौंको महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेका निजी घर भत्काउनुपर्ने देखिएको हो ।
सडकको मध्यबिन्दुबाट ३१र३१ मिटर दायाँबायाँ हुनुपर्ने भएकाले दुवै भागका घर भत्काउनुपर्ने छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ६८ अरोड क्षतिपूर्तिमै खर्च गर्नुपर्ने छ । यद्यपी क्षतिपूर्तिको दर निर्धारण भएपछि यसको ठोस आकार लिने छ ।
चीनको सहयोगमा विस्तार हुने दोस्रो खण्डको काममा पहिले साइट क्लियर गर्नुपर्ने छ । साइट क्लियर गरेपछिमात्र काम सुरू गर्ने चिनियाँ पक्षले अडान लिएपछि सो काममा अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विभाग लागिपरेका छन् ।
यसमा अहिले रूख काट्ने र त्यसपछि निजीघर तथा जग्गा परे अधिग्रहण वा भत्काउने काम सुरू हुने छ । महाराजगञ्जमा निजी घर परे पनि अन्यत्र भने सरकारी भवन भत्काउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् ।
विशेषगरी प्रहरी चौकी धेरै रहेको तिवारीले जानकारी दिए । साइट क्लियर भएपछि चिनियाँ पक्षको सहभागितामा डिजाइन स्वीकृत भएपछि विस्तारको काम सुरु हुने छ ।
२०७६ पुस १८ गते प्रकाशित
२०७६ पौष १८ गते ११:२६ मा प्रकाशित
दशैँ मनाउन बाहिर जादैँ हुनुहुन्छ ? विचार गर्नुहोस् ! प्रहरीले जारी गर्यो यस्तो नियम